राजेन्द्र महतोको धनः पाँचवटा भैंसी, ९५ तोला सुन ! | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← राजकुमार ह्यारीले नेपाल भ्रमणको बेला ट्रेकिङ गर्ने
लाप्राकका भूकम्पपीडितलाई गुप्सीपाखामा घडेरी →
१ माघ, काठमाडौं । मधेसका गरीव एवं उत्पीडित जनतालाई पहाडे समुदाय र काठमाडौंविरुद्ध भड्काउँदै हिँडेका सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले काठमाडौंमा कति जग्गाजमीन जोडेका होलान् ? तथ्य थाहा पाउने हो भने मधेसमा आन्दोलनरत उनकै दलका कार्यकर्ता छक्क पर्न सक्छन् ।
काठमाडौंको भीमसेनगोलामा राजेन्द्र महतोको घर रहेको सबैले थाहा पाइसकेकै विषय हो । तर, त्यसबाहेक उपत्याकाका कुनाकाप्चीमा समेत महतोले आफू र पत्नीका नाममा करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा जोडेका छन्, जसको स्रोत स्पष्ट छैन । काठमाडौंको मच्छेगाउँ-२ मा महतोपत्नी एवं सांसद शैल कुमारी देवीका नाममा १ रोपनी ६ आना २ पैसा जग्गा छ । त्यसैगरी काठमाडौंकै वार्डभञ्ज्याङ-३ मा महतोले २ रोपनी ९ आना जग्गा किनेका छन् । यो जग्गा पत्नीको नाममा नभएर महतोले आफ्नै नाममा राखेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका वटा नम्बर ९, प्रयागमार्गमा रहेको ५ आना जग्गाचाँहि महतोपत्नी तथा सांसद शैल कुमारी महतोकै नाममा छ । महतो परिवारले घर बहालबाट समेत नियमित आम्दानी गर्दै आएको छ ।
मधेसका जनताको हितका लागि लागेको बताउने तर सत्तामा गएपछि कमाएको पैसाले उपत्यकामा जमिन जोड्ने महतो परिवारको मधेसमा पनि जग्गा जमीन छ । नागरिकता अनुसार महतोको स्थायी ठेगाना सर्लाहीको बबरगञ्ज गाविस वडा नम्बर ८ मा पर्छ । पूर्वमन्त्री समेत रहेका महतोले स्थायी लेखा नम्बर पनि लिएका छन् । उनको स्थायी लेखा नम्बर १००३६२१०९ हो ।
सर्लाहीकै नेला गाविसमा महतोका नाममा १४ कठ्ठा जमिन छ । धनुषाको बेगासीपु-६ मा महतोपत्नी शैलकुमारीका नाममा १ विघा १३ कठ्ठा १८ धुर जग्गा छ ।
महतोको अर्को बैंक खाता सर्लाही मलंगवाको नेपाल बैंक लिमिटेडमा छ । त्यहाँ पनि उनले नगद जम्मा पारेका छन् । त्यसैगरी कृषि विकास बैंक गौशालामा महतोपत्नी शैल कुमारी देवीको खाता छ । सांसद बनेपछि एभरेष्ट बैंकमा पनि उनले खाता खोलेकी छिन् ।